प्रत्येक मौसमले केही लुगाहरू प्रदान गर्दछ। यो एक सम्पत्तिद्वारा एकताबद्ध छ - यो व्यावहारिक, सुविधाजनक र एक निश्चित तापमान शासनसँग अधिकतम हुनुपर्छ। वर्षको चिसो महिनाको लागि, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा हावाबाट जोगाउनु पर्छ कि तपाईलाई पश्चात्ताप चाहिन्छ। तथापि, कपडाको यो लोकप्रिय टुक्रालाई हटाउन र न्यानो र सहज शर्ट-मोबाईल द्वारा बदल्न सकिन्छ। उनले पूर्णतया परम्परागत स्फफ को प्रतिस्थापन गर्नेछन् । बुनाई सुत्नुको साथ बुना बाँदर मास्टर गर्न सजिलो छ। केहि दिन भित्र तपाईं कार्य संग सामना गर्न सक्नुहुन्छ।
सुई कार्य योजना को विश्वव्यापीता
महिलाहरु र पुरुषहरु को लागि सुई बुनाई संग बुनाई , साथ नै पसंदीदा पसंदीदा को लागि त्यहि तरिका मा गरिन्छ। तथापि, त्यहाँ केही भिन्नताहरू छन्। थोडा काल्पनिक पछि सुई महिलाहरु लाई पूर्ण मोडेल बनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले, निष्पक्ष सेक्सको लागि अगाडि फर्काउने सुईको बुनाई बुट्टा र अधिक ज्वारन यार्नको प्रयोग गरी विविध प्रकारका ढाँचाहरू प्रयोग गरिनेछ। Volumetric "रबड ब्यान्ड" संग संयोजन मा "harnesses" को उपयोग संग काम गर्दछ। यदि सुर्खेतले "अगाडि" स्मोनेस गरेर गरेको हो, किनारहरू होक भएका छन्। पुरुषहरूको लागि सुई बुनाई संग माणिक बुनाई काम गर्न को लागि एक अधिक कठोर दृष्टिकोण र मध्यम धागे रंग को आवेदन प्रदान गर्दछ।
कसरी काम सुरु गर्ने?
सुरू सुरुवात गर्दा, यो उत्पादनको आकार निर्धारण गर्न आवश्यक छ। बुनाई सुई संग शर्ट-आस्तीन बुनाई एक ठूलो ठुलो कलरको बाईक हो, जसको आकार हुनुपर्छ कि यो सजिलै उत्पादन को उत्पादन गर्न सम्भव छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण बिन्दु यार्न को चयन हो। सर्दको लागि ओम्निबस बुनाई सुई संग बुनाई ऊन धागे बाट बनाइएको छ। शरद ऋतु र वसन्तको लागि राम्रो ऊन धागा उत्तम छ। सुई कार्य को लागी सामाग्री को रंग पनि चुन्नुहोस। यो बाह्य कपडाको साथमा हुनुपर्छ।
सुईको लागि, तपाईंलाई 100 ग्राम धागा, परिपत्र वा बुनाई सुई भण्डारण गर्न आवश्यक छ।
आफ्नो बुनाई सुई संग बुनाई एक कलर संग शुरू हुन्छ। थप स्वादको लागि, उत्पादन को यो भाग लोचदार ब्यान्ड संग बनाइएको छ। प्राय: ढाँचा प्रयोग गरी "रबड ब्यान्ड2एक्स 2"। यो बाहिर जान्छ, लगातार2अनुहार,2पर्ल कुखुराहरू अनस्कुलो गर्दै।
प्रवक्तामा, लूप्सहरूको अनुमानित संख्या टाइप गरिएको छ र रबर ब्यान्डको ढाँचामा बुना भयो। परिपत्र बुनाईको लम्बाइ कम्तिमा बीस-पाँच सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। कामको नतिजाको रूपमा, हामी एक लोचदार भण्डारण पाउँदछौं, शीतकालीन स्वेटरको ढोका जस्तो।
बुनाई अनुहार चिकनाई संग जारी छ। यस अवस्थामा, लूप्सको अतिरिक्त आवश्यक गर्न आवश्यक छ। लूपहरूको सबै संख्या4बराबर भागहरूमा विभाजित छ। हामी सबै अजीब संख्या "अनुहार" गर्छौं। प्रत्येक पनि संख्यामा चारवटा विभाजनमा थपिएका छन्। त्यो, पीठ संग गणना loops को चौथा भाग बांधेर , हामी एक पाश3बाट टाइप गर्दैनौं।
24 लाइनहरू स्प्रे गरिएका छन्। फलस्वरूप, प्रत्येक पनि पङ्क्तिमा चार स्थानहरूमा थपेर 48 छोटो क्यान्सरले क्यान्सर वृद्धि गर्नेछ।
शर्ट-मोबाईको लम्बाइ जोडिएको पङ्क्तिहरूको संख्याले थप्नका साथ समायोजन गर्न सकिन्छ। उत्पादन तयार छ।
बेंच को प्रदर्शन को बदलाव
उन्नीको लागि बुनाई पद्धति धेरै सरल छ। एक शिल्पकार, यसको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू गर्न सक्दछ। यो सुरुचिपूर्ण स्त्री वा सख्त पुरुषहरू हुन सक्छ, र विशेष गरी आरामदायक बच्चाहरूको शर्ट-सामने।
यस योजनाको अनुसार, तपाईं आफ्नो शर्ट सुई बुनाई संग बुन गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न को लागी, ढोका-भण्डारणको सट्टा, कुनै पनि आकारको ढोका तेज हुन्छ, बटनहरू सँग बकेट प्रदान गर्दछ।
तपाईंको पुस्तकका लागि बुकमार्कहरू - छुनुहोस्, अनन्य
लडकियों को बुनाई, या तपाईंको बेटी को एक महिला ले कसरि बनाइयो
ग्याँस को रूप मा घर कुकीहरू
Mastitis: उपचार र लक्षण
Tarragon - यो के हो? गुण र tarragon को आवेदन
"Gazelle" को लागि सही ट्रेलर कसरी चयन गर्ने?
बुनाइ felting ऊन को कला मा एक पाठ। मास्टर कक्षाहरू बुझ्न मदत गर्नेछ
अष्ट्रेलियाको क्षेत्र। नक्सामा अष्ट्रेलिया। अष्ट्रेलियाका विशेषताहरू
तिखार्दै हीरा सर्कल: एक सिंहावलोकन, वर्णन, प्रकार र मूल्यांकन। हीरा उपकरण sharpening लागि पाङ्ग्रा पीस
खुरुचचेभको बेडरूमको गृह। बेडरूम फर्नीचर
खमीर के तयारी राम्रो छ?
लाग्यो को फूल। आफ्नो हात सुन्दर उत्पादनहरु सिर्जना गर्दै